စက် - Guangzhou Baiyi Intelligent Equipment Co. , Ltd.
Feature: ပေါ့ပါးသောဒီဇိုင်း၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်း၊ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုမြင့်မားခြင်း၊ လည်ပတ်မှုလွယ်ကူခြင်း၊ စက္ကူ၊ တံဆိပ်၊ စက္ကူသေတ္တာ၊ ပလပ်စတစ်အိတ်စသည်တို့အတွက်သင့်တော်သည်။ ၎င်းကို TIJ ပရင်တာ၊ CIJ ပရင်တာစသည်တို့နှင့်ပေါင်းစပ်။ ရနိုင်ပြီးစာသား၊
ဒါဟာစိတ်ကြိုက်အောင်, အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုနိုင်ပါတယ် pls ဒီမှာနှိပ်ပါ.
စံပြ: BY-TF01-400 / BY-TF04-300 / BY-TF02-400
အသွင်အပြင်လက္ခဏာ - အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်း sh တင်ပို့မှုတွင်အဆင်ပြေသည်၊ သက်ရောက်နိုင်သည့်စွမ်းရည်မြင့်သည်။ စက္ကူ၊ တံဆိပ်၊ စက္ကူသေတ္တာ၊ ပလပ်စတစ်အိတ်စသည်တို့အတွက်သင့်တော်သည်။ ၎င်းကို TIJ ပရင်တာ၊ CIJ ပရင်တာစသည်တို့နှင့်ပေါင်းစပ်။ ရနိုင်ပြီးစာသား၊
ဒါဟာစိတ်ကြိုက်အောင်, အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုနိုင်ပါတယ် pls ဒီမှာနှိပ်ပါ
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Standard TTO လမ်းခွဲ
အသွင်အပြင်： Standard TTO လမ်းခွဲသူသည် TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်းနည်းပညာနှင့်အသိဥာဏ်ရှိသည့်နို့တိုက်ကျွေးရေးနည်းပညာကိုပေါင်းစပ်ထားပြီးအလိုအလျောက်အစာကျွေးခြင်းနှင့်အပူပုံနှိပ်ခြင်းကိုအပြည့်အဝနားလည်သည်။ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ပလပ်စတစ်အိတ်များ (ပလပ်စတစ်အိတ်များ၊ တံဆိပ်များ၊ အဖုံးအုပ်များစသည်တို့အပါအ ၀ င်) တွင်ပုံနှိပ်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်အမျိုးမျိုးသောဘားကုဒ်နံပါတ်၊ QR ကုဒ်နှင့် Multi-line ကြီးသောအကြောင်းအရာပါပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်ပုံနှိပ်နိုင်သည်။ တင်သွင်းသောထုပ်ပိုးခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ဆေးဝါး၊ ဓာတုပစ္စည်း၊ အစားအစာစသည်ဖြင့်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုထားသောအနုပညာနှင့်တိကျမှု။
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: TTO လမ်းခွဲအသစ် (A / B)
စံပြ: BY-Model: BY-TF01 / 02-TTO-A / BY-TF01 / 02-TTO-B ကို
အသွင်အပြင် - Standard TTO လမ်းခွဲမှုနှင့်တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးဆေးဝါးများ၊ ပိုးသတ်ဆေးများ၊ မျိုးစေ့နှင့်ရိုးရာတရုတ်ဆေးပညာနယ်ပယ်များနှင့်သုံးစွဲသူများ၏တုန့်ပြန်မှုများကို TTO လမ်းခွဲ၏အောင်မြင်စွာအသုံးပြုမှုအပေါ်အခြေခံသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ပါးလွှာသော၊ အလွန်ပျော့ပျောင်းသော၊ ငြိမ်သက်သောလျှပ်စစ်ပြissuesနာများနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောဒီဇိုင်းအိတ်၊ အလွှာပေါင်းများစွာသော M အိတ်၊ ဇစ်ပါတ်အိတ်ကပ်နှင့်လွယ်ကူစွာပွင့်လင်းသောအိတ်စသည်တို့ကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲနိုင်သည်။ မြန်နှုန်း၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့်လည်ပတ်မှုအပြင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည်မကြုံစဖူးသောအမြင့်သို့ရောက်ရှိသည်၊ အထူးသဖြင့်မုန့်ဖုတ်ထားသောအစားအစာအထုပ်တွင်လူသားပုံနှိပ်ခြင်းကိုဖြေရှင်းသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: တိုတို TTO လမ်းခွဲ
အသွင်အပြင်： ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုတောင်းသော TTO လမ်းခွဲဖြစ်သည်။ ပုံမှန်ပွတ်တိုက်မှုစနစ်ကိုအသုံးပြုသည်၊ ပလပ်စတစ်အိတ်အများစုအတွက်သင့်တော်သည်၊ ဒါဟာမြန်နှုန်းအပေါ်တစ်ခုတည်းမော်တာကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းချမှတ်။ PLC သို့မဟုတ် HMI မရှိ၊ လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်၊ အလေးချိန်ပေါ့သည်။
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: အဆင့်မြင့်အသိဉာဏ်ရှိသောနို့တိုက်ကျွေးရေးနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းပလက်ဖောင်း / မြန်နှုန်းမြင့်အသိဉာဏ်ကျွေးမွေးခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းပလက်ဖောင်း
မော်ဒယ်: BY-TF01 / 02-400
ထူးခြားချက် - ပုံမှန်ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည် (TIJ ပရင်တာ၊ HD DOD, CIJ ပရင်တာ၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်းစသည်တို့) ။ ၎င်းသည်နည်းပညာ၊ ပြည့်စုံခိုင်မာပြီး၊ ဒါဟာအသိဉာဏ်, modular, ပုံစံအသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းကိုအယူအဆချမှတ်သည်။ စက္ကူ၊ တံဆိပ်၊ ကတ်၊ ထုပ်ပိုးသေတ္တာအမျိုးအစားများအတွက်အထူးသင့်လျော်သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ကုန်၊ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ ရွေးချယ်ခြင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာကောင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်အချို့ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်နှစ်ဆထောက်လှမ်းခြင်း၊ အလိုအလျောက်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်ငြင်းပယ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Multi-channel အသိဉာဏ်ကျက်စားခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းပလက်ဖောင်း / စံအသိဉာဏ်နို့တိုက်ကျွေးရေး & တံဆိပ်ကပ်ခြင်းစနစ်
စံပြ: BY-MTF02-650 / BY-SF01-TTO
ထူးခြားချက် - ပုံမှန်ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည် (TIJ ပရင်တာ၊ CIJ ပရင်တာ၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်) ၎င်းတွင်နည်းပညာ၊ ပြည့်စုံကောင်းမွန်သော၊ အသုံးချနိုင်သောရှုပ်ထွေးမှုအတွက်မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်ရှိသည်။ ဒါဟာအသိဉာဏ်, modular, ပုံစံအသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းကိုအယူအဆချမှတ်သည်။ စက္ကူ၊ တံဆိပ်၊ ကတ်၊ ထုပ်ပိုးသေတ္တာအမျိုးအစားများအတွက်အထူးသင့်လျော်သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ကုန်၊ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ ရွေးချယ်ခြင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာကောင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်အချို့ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်နှစ်ဆထောက်လှမ်းခြင်း၊ အလိုအလျောက်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်ငြင်းပယ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ထုတ်ကုန်အမည် - ပုံမှန်နို့တိုက်ကျွေးရေးနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းပလက်ဖောင်း (ခရမ်းလွန်ပုံနှိပ်ခြင်း) / မြန်နှုန်းမြင့်အသိဉာဏ်ရှိသောနို့တိုက်ကျွေးရေးနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းပလက်ဖောင်း (ခရမ်းလွန်ပုံနှိပ်ခြင်း)
မော်ဒယ်: BY-TF01 / 02-400 (ခရမ်းလွန်) / BY-HTF01 / 02-400 (ခရမ်းလွန်)
အသွင်အပြင် - ကျွန်ုပ်တို့၏စံထက်မြက်သောပုံနှိပ်ခြင်းပလက်ဖောင်းနှင့်ခရမ်းလွန်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်နည်းပညာလိုအပ်ချက်အရ UV ပုံနှိပ်ခြင်းပလက်ဖောင်းကိုတီထွင်သည်။ ဒါဟာမြင့်မားသောစံအသိဉာဏ်သက်ဆိုင်သောပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်း၏အသုံးချမှုနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုစုပ်ယူပြီးအသိဉာဏ် ရှိ၍၊ ပုံစံပြုပြီးပုံစံချသည့်ပုံစံဒီဇိုင်းကိုချမှတ်သည်။ စက္ကူ၊ တံဆိပ်၊ ကတ်၊ ထုပ်ပိုးသေတ္တာအမျိုးအစားများအတွက်အထူးသင့်လျော်သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ကုန်၊ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ ရွေးချယ်ခြင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာကောင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်အချို့ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်နှစ်ဆထောက်လှမ်းခြင်း၊ အလိုအလျောက်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်ငြင်းပယ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: TTO ပရင်တာနှင့်အတူပုံမှန် rewinder UV ပရင်တာအတွက်ပုံမှန် rewinder / UV ပရင်တာအတွက်မြန်နှုန်းမြင့် rewinder
ပုံစံ: BY-SR500-TTO / BY-SR500-UV / BY-HR450-UV
အသွင်အပြင်: ကတံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးရုပ်ရှင်လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက်တီထွင်သည်။ အစဉ်အလာတံဆိပ်ပုံနှိပ်ခြင်းနည်းပညာလိုအပ်ချက်နှင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းဆိုင်ရာအမှတ်အသားအရကျွန်ုပ်တို့သည်“ လျှောက်လွှာအမြောက်အများရှိသောစက်တစ်လုံးကိုရရှိရန်ကြိုးစားသည်။ ၎င်းသည်ရုပ်ရှင်နောက်ပြန်လှည့်ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ပြန်ခြင်းများအတွက်သင့်လျော်သည်” ။ "လုပ်ဆောင်ချက်တော်တော်များများရှိတဲ့စက်တစ်လုံး၊ TTO ပရင်တာနှင့်ခရမ်းလွန်ပုံနှိပ်ခြင်းစနစ်အတွက်လည်းသင့်တော်သည်။ " "စက်ပုံစံပေါ်တွင်မော်ဂျူလာ၊ မော်ဂျူလာအများရှိသည့်စက်တစ်လုံး၊ သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်အရမော်ဂျူးရွေးချယ်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်" ၎င်းသည်လိပ်အတွက်လိပ်စာအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုနှင့်လိပ်၏သင်္ကေတဖြင့်ရုပ်ရှင်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
၎င်းသည်7လက်မရောင်စုံ HMI, PLC, micro PC ကိုအသုံးပြုသည်။ လူများသည်ရုပ်ရှင်နှင့်စက္ကူတံဆိပ်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အသွင်အပြင်ခြားနားမှုအပေါ် မူတည်၍ HMI ပေါ်ရှိ parameter setting ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဤအတောအတွင်း HMI သည်အချိန်နှင့်တပြေးညီအလုပ်လုပ်နေသောအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးနှိုးစက်ကိုလည်းပေးလိမ့်မည်။ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အောက်တွင် linear နည်းလမ်းဖြင့်လွှတ်ခြင်း & စုဆောင်းခြင်း, variable ကိုမြန်နှုန်း, ရပ်တန့်သည့်အခါ Anti-loosening ။ အဖြူရောင်အမှတ်အသားသို့မဟုတ် swatch sensing စသည်တို့ကိုလုပ်ဆောင်ချက်များကို။ ဒါဟာတကယ်ကိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ အသုံးပြုသူများသည်ပုံနှိပ်ခြင်းဆိုင်ရာတိကျမှန်ကန်မှုကိုမြှင့်တင်လိုပါက Auto rectify system ဟုခေါ်သည့် optional function တစ်ခုရှိသည်။
Intruduction: အသိဉာဏ်ရှိသောအစာကျွေးသောစက်သည်ကျွန်ုပ်တို့တီထွင်ထားသောအသစ်သောအစာကျွေးသောစက်ကိရိယာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သေးငယ်။ ပေါ့ပါးသည်။ ထုတ်ကုန်များအလွယ်တကူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း၊ လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ခြင်း၊ ပို့ဆောင်ခြင်းတိကျမှုနှင့်ပွင့်လင်းသောဆက်သွယ်ရေးဆိပ်ကမ်း၊
ပစ္စည်းပေးပို့ခြင်းကိုနားလည်ရန်အတွက်ထုပ်ပိုးမှုလိုင်းပေါ်တွင်ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ကဒ်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ရှိပြီးသားထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင်ကွန်ယက်ချိတ်ခြင်း။ အချက်အလက်ရှာဖွေခြင်းစနစ်၊ ပစ္စည်းရှာဖွေခြင်း၊ အချက်ပြဗလာမရှိသောလုပ်ဆောင်ချက်တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်း၏ထိန်းချုပ်မှုစနစ် HMI & PLC ဖြစ်ပါသည်, parameter သည် setting ကိုလွယ်ကူပြီးအဆင်ပြေသည်။
အသွင်အပြင် - နှစ်ဆစာရွက်နှိုးခြင်းနှင့်ရပ်တန့်ခြင်း၊ ရေတွက်ခြင်း၊ သတ်မှတ်ထားသောအရေအတွက်နှင့်အချိန်အရအလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ထုတ်ကုန်နှိုးဆော်ခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်များကိုနှိုးဆွရန်ပြင်ပမှချုပ်ကိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိပါ။ စက္ကူ, ခန္ဓာကိုယ်စက္ကူနှင့်စက္ကူထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးခေါက်။
Multi- ဘူတာရုံအသိဉာဏ်နို့တိုက်ကျွေးရေး & collating စနစ်
စံပြ: BY-MFJ3000-06 / BY-MFJ6000-06 / BY-MFJ6000-07
အသွင်အပြင်။ ၎င်းသည်ထုပ်ပိုးစက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးလက်ထောက်ပစ္စည်းကိရိယာဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ပုံနှိပ်ထားသောထုတ်ကုန်အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းများကိုလူသားအမှတ်အသားအဖြစ်တစ်ခုတည်းသောတံဆိပ်၊ အရောင်စာမျက်နှာများ၊ လက်စွဲစာအုပ်များ၊ စာအုပ်များ၊ ကတ်များနှင့်စီဒီစသည်တို့ကိုအစားထိုးခဲ့သည်။ ဒီဇိုင်းပုံစံ၊ အမြန်နှုန်းမြန်ပြီးလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးခြင်း။
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: ပုံမှန်မျက်နှာဖုံးမျက်နှာဖုံးအစာကျွေးခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းစက် （KN95）
ပုံစံ - BY-TF04-300 (KN95)
Feature: ဒီ Feeder မှာ Team Technology ကပါ။ အထူးသဖြင့်မျက်နှာဖုံးမျက်နှာဖုံး၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူးသင့်လျော်သည်။ ၎င်းသည်တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံးနှင့် N95 / KN95 မျက်နှာဖုံးမျက်နှာဖုံးအစာကျွေးခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုရှိပြီးသား earing loop machine နှင့်ပေါင်းစည်းနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်အရစဉ်ဆက်မပြတ်ကျွေးမွေးရန် (သို့) မပြတ်စားရန်အတွက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ (မှတ်ချက် pls: မျက်နှာမျက်နှာဖုံးအစာကျွေးခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်ခြားနားချက်အချို့ရှိသည်။ )
ပုံစံ - BY-TF04-300 (တစ်ခါသုံးမျက်နှာမျက်နှာဖုံး)
Feature: ဒီ Feeder မှာ Team Technology ကပါ။ အထူးသဖြင့်မျက်နှာဖုံးမျက်နှာဖုံး၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူးသင့်လျော်သည်။ ဒါဟာတစ်ခါသုံးမျက်နှာမျက်နှာဖုံးအစာကျွေးခြင်းအဘို့ဖြစ်၏။ ၎င်းကိုရှိပြီးသား earing loop machine နှင့်ပေါင်းစည်းနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်အရစဉ်ဆက်မပြတ်ကျွေးမွေးရန် (သို့) မပြတ်စားရန်အတွက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ (မှတ်ချက် pls: မျက်နှာမျက်နှာဖုံးအစာကျွေးခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်ခြားနားချက်အချို့ရှိသည်။ )
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: မြန်မြန်မျက်နှာမျက်နှာဖုံးအစာကျွေးခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်စက် (KN95)
Feature: ဒီ Feeder မှာ Team Technology ကပါ။ အထူးသဖြင့်မျက်နှာဖုံးမျက်နှာဖုံး၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူးသင့်လျော်သည်။ ၎င်းသည် N95 & KN95 ၏အစာကျွေးခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။